VaMaziwisa naVaPambuka Vanobvisiswa Mari Yechibatiso
VaPsychology Maziwisa, nhengo yeZanu PF vachimirira Highfield West
Vaive mukuru wekambani yenharembozha yeNet-One, VaReward Kangai vasungwa manheru ano neZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZACC, vachipomerwa mhosva dzekuita zvehuwori.
Mumwe komishina weZACC, VaGoodson Nguni vatenda kuti VaKangai vasungwa uye vacharara vakachengetedzwa pakamba yemapurisa yeAvondale Police Station, vozoendeswa kudare nemusi weChina.
VaNguni vati VaKangai vari kupomerwa mhosva dzinosvika makumi maviri neimwe dzekuita zvehuwori pamwe nekubira kambani yeNet-One kuburikidza nekupa mabasa zviri kunze kwemutemo kukambani yeBopela, iyo yavati ndeye shamwari yavo ivo VaKangai.
Zvichakadaro, mumiriri weHighfield West muparamende, VaPsycology Maziwisa, pamwe nemutori wenhau Oscar Pambuka, avo vakasungwa nemusi weChipiri, vamiswa pamberi pedare ramejasitiriti muHarare.
Vaviri ava vabhadhariswa madhora mazana matatu pamunhu semari yechibatiso mushure mekupomerwa mhosva yekubira kambani yeZimbabwe Electricity Supply Authority zviuru gumi nezviviri nemazana mashanu zvemadhora.
Vaviri ava vanziwo vasiye magwaro avo ekufambisa kudare uye kuti vaende kumapurisa munzvimbo dzavanogara kamwe chete pasvondo dzamara nyaya yavo yapera.
VaMaziwisa naPambuka vanziwo havafaniri kupindira munyaya dzekuferefetwa kwenyaya yavo uye vanzi vadzoke kudare musi wa30 mwedzi uno.
Vaviri ava vakasungwa nekomisheni inoona nezvekudzivirirwa kwehuwori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZACC, mushure mekunge kambani yavo yeFruitful Communications yakapihwa basa rekushambadza kambani yeZESA zvisina tsarukano.
Vaviri ava vari kumiririrwa negweta VaJonathan Samkange.
Mune imwewo nyaya, mutauriri wedare reNational Assembly VaJacob Mudenda vazivisa nhengo dzedare iri kuti bato reZanu PF harichaita misangano yaro yePolitiburo panguva inogara dare iri vachiti izvi zvinovhiringa mashandire edare iri.
VaMudenda vanoti vabvumirana nemutungamiriri wenyika kuita izvi kuitira kupa makurukota ehurumende mukana wekuuya kuzopindura mibvunzo kudare sezvo makurukota mazhinji ari nhengo dzePolitburo.
VaMudenda vataura mashoko aya mushure mekunge nhengo dzedare iri kubva kubato rinopikisa reMDC –T dzati hadzisi kufara kuti makurukota ehurumende ari kuramba asingakoshesi dare iri nekurega kuenda kuzopindura mibvunzo sezvaanotarisirwa kuita Chitata chega chega.
Patanga kugara dare iri nhasi, mudare mange muine makurukota maviri chete, uye kana ivo VaMudenda nemutevedzeri wavo, Amai Marble Chinomona, vange vasimo izvo zvatsamwisa nhengo dzeMDC.
Vanokokera nhengo dzeMDC-T mudare iri, VaInnocent Gonese, vati vange vasingataririsiri izvi zvikurusei sei sezvo pave nehurumende itsva munyika.
Asi VaMudenda vazouuya pave paye nemamwe makurukota vakazokumbira ruregerero.
Mutevedzeri wemutungamiriri weMDC-T, VaNelson Chamisa, vatenda VaMudenda nemashoko avo vachiti vanovimba kuti zvavataurwa zvichatevedzwa.
Zvichakadai mutevedzeri wegurukota rezvemari VaTerence Mukupe vaudza dare iri kuti mabhanga akazvimirira haamanikidzwe kushanda nevanhu vaasingade kushanda nawo.
Vachipindura mubvunzo wekuti sei mamwe mabhanga ari kuramba kuvhura ma accounts, VaMkupe vati kunyange hazvo hurumende iri kukurudzira vanhu kushandisa mabhanga, mabhanga aya haamanikidzwe kushanda nevanhu vaasingade kushanda navo.
Vati vanenge varambwa nemabhanga akazvimirira vanokwanisa kuenda kumabhanga ehurumende akaita sePOSB.
Nhengo dzedare iri dzatiwo hadzisi kufara nenyaya yekuti kunyange hazvo hurumende ichiti vana vezvikoro havafaniri kudzingwa kana vasina kubhadhara mari yechikoro, vana vari kudzinga muzvikoro zuva nezuva pasina zviri kuitwa nebazi rezvedzidzo ye primary ne secondary.
Mumwe wevasiri kufara mumiriri weChegutu West mudare iri VaDexter Nduna veZanu PF.
Gurukota rezvedzidzo yePrimary neSecondary, VaPaul Mavhima, vati hapana mwana anofanira kudzingwa nekuti haana kubhadhara mari yechikoro asi vakati zvakakosha kuti vabereki vabhadhare mari idzi kuti zvikoro zvikwanise kushanda zvakanaka.
Mumiriri weHarare Central VaMurisi Zwizwai vabvunza gurukota rinoona nezvezvicherwa, VaWinston Chitando, kuti vachauuya rini kuzoudza dare iri pamusoro pemari inoita mabhiriyoni gumi nemashanu iyo yakanzi nevaimbove mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, yakanyangarika pakatengeswa mangoda ekwaMarange.
VaChitango vapindira vachiti vaizoita izvi mukati menguva pfupi inotevera asi sachigaro wekomiti inoona nezvezvicherwa VaTemba Mliswa varamba izvi vachiti komiti yavo ichaongorora nyaya iyi.
VaMudenda vabvumirana naVaMliswa vachiti bazi rezvezvicherwa rinofanira kupa komiti yaVaMliswa mukana wekuita basa rayo.
Zvichakadai VaChitando vazivisawo kuti nyika ichatengesa mamwe mangoda ayo mwedzi unouuya uye bazi ravo richazivisa paramende neveruzhinji nematengeserwo anenge aiitwa mangoda aya.